यस्तो छ बडादशैँको शुभ साइत – Ramro Sandesh यस्तो छ बडादशैँको शुभ साइत – Ramro Sandesh
यो वर्षको बडादशैँको शुभ साइत सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले २०७७ को विजयादशमीलगायत दशैंका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको हो ।
जसमा घटस्थापनाको साइत कात्तिक १ गते शनिबार बिहान ११ः४६ बजे शुभ रहेको समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
देशभरका शक्तिपीठमा घटस्थापनाकै दिनदेखि विशेषरूपमा भक्तजनको भीड लाग्ने भए पनि यस वर्ष कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकाले भौतिक दूरी कायम गरी दर्शन गर्नुपर्ने अवस्था छ । कात्तिक २ गते बिहान १०ः५३ बजे पश्चिम फर्केर झन्डा फेर्ने साइत दिइएको छ । यस्तै कात्तिक ५ गते बुधबार पचली भैरवयात्राको साइत जुरेको छ । कात्तिक ७ गते शुक्रबार फूलपाती छ । फूलपाती भित्राउन साइत आवश्यक पर्दैन ।
दशैँको मुख्य दिन कात्तिक १० गते सोमबार विजयादशमी पर्व परेको छ । यसदिन देवी विसर्जनका लागि बिहान १०ः११ बजेको साइत शुभ रहेको छ भने साइत नै खोजेर टीका लगाउनेका लागि बिहान १०ः१९ बजेको साइत उत्तम छ । सामान्य मानिसले भने विजयादशमीका दिन दिनभर टीका ग्रहण गर्न कुनै बाधा नरहेको समितिको निर्णय छ ।
–नव क्षितिज साप्ताहिकबाट